» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु भाग २०
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु भाग २०
६ असार २०७७, शनिबार २०:२५
मकवानपुर, ६ असार । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ को ईटहरी अडिसनबाट १५ जना प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका छन् । दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका प्रतियोगीहरुको जानकारी दिने उदेश्यले तयार पारिएको यस भिडियो सिरिजको यो बिसौँ भाग हो । यस भागमा ईटहरी अडिसनबाट छानिएका पहिलो ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । यस भिडियोमा दिनेश ढुङ्गाना, बेनिजा सिवा, दोर्जे तामाङ, प्रज्ञा प्रधान र विजयकुमार दंगालका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
१) दिनेश ढुंगाना– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका पहिलो प्रतियोगी हुन् दिनेश ढुंगाना । ईलामको सुर्योदय नगरपालिकाका दिनेशलाई संगीत क्षेत्रमा लाग्न परिवारको सहयोग छ । अध्ययन र संगीतलाई संगै अगाडि बढाएका दिनेशले विद्यालय जीवनदेखि नै गीत गाउन सुरु गरेका हुन् । विद्यालय तहमा हुँदा गायन प्रतियोगितामा प्रथम भएको याद पनि उनीसँग छ । विद्यालय तहबाट कलेजमा प्रवेश भएपछि पनि उनको गायन प्रतियोगितामा भाग लिने र विजयी हुने क्रम रोकिएन । झापामा बसेर ब्याचलर अध्ययन गरेका दिनेशले मास्टर्स भने ललितकलामा सुरु अध्ययन गरेका छन् । उनले अडिसनमा ‘उकाली ओराली गर्दै’ बोलको गीत गाएका थिए । उक्त गीतबाट सबै निर्णायकको मन जित्न सफल दिनेश सोही गीतबाटै दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका हुन् ।
२) बेनिजा सिवा– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएकी दोस्रो प्रतियोगी हुन् बेनिजा सिवा । उनी स्टाफ नर्सका रुपमा कार्यरत छिन् । बेनिजाले अडिसनमा ‘मेरो प्यारो मान्छे तिमी’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । निर्णायकहरुले दोस्रो गीत गाउन लगाएपछि उनले ‘फेरि आयो’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएकी हुन् ।
३) दोर्जे तामाङ– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका तेस्रो प्रतियोगी हुन् दोर्जे तामाङ । मोरङको बेलबारी निवासी दोर्जेले सानैदेखि संगीत क्षेत्र छानेका थिए । एसएलसी पश्चात व्यवसायिक रुपमा संगीत क्षेत्रमा लागेका दोर्जे विभिन्न लाईभ शोहरु गरिरहेका छन् । उनी केही कभर गीतहरुमार्फत पनि श्रोता दर्शकमाझ परिचित छन् । उनले अडिसनमा ‘सँगै पाईला सार्नु मसँग’ बोलको गीत गाएका थिए । पहिलो गीतबाटै निर्णायकहरुलाई प्रभावित पार्न सफल उनले दोस्रो पटक ‘उडायो हावाले’ बोलको गीत गाएका थिए ।
४) प्रज्ञा प्रधान– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएकी चौथो प्रतियोगी हुन् प्रज्ञा प्रधान । झापाको सुरुङ्गा निवासी प्रज्ञालाई संगीत क्षेत्रमा लाग्न पारिवारिक समर्थन पनि छ । मिस टिन झापामा समेत सहभागी भईसकेकी प्रज्ञा संगीत क्षेत्रमा पनि सक्रिय छिन् । उनका केही कभर गीतहरु समेत सार्वजनिक भइसकेका छन् । उनले यसअघि नेपाल आईडलमा पनि सहभागिता जनाएकी थिईन् । उनले अडिसनमा ‘म आँखैमा राखिन योग्य’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । पहिलो गीतमा निर्णायकहरुको मन जित्न सफल प्रज्ञाले ‘डुबिरहन देऊ मलाई’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएकी हुन् ।
५) विजय कुमार दंगाल– नेपाल स्टारमा दोस्रो चरणका लागि ईटहरीबाट छानिएका पाँचौँ प्रतियोगी हुन् विजय कुमार दंगाल । विर्तामोड झापा निवासी विजय साहित्यकार पनि हुन् । उनी संगीत पनि सिक्दैछन् । उनले अडिसनमा ‘साँझको घाम’ बोलको गीत गाएका थिए । उनी सोही गीतबाट दोस्रो राउण्डका लागि छनौट भएका हुन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईलाई यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज मनपर्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।